Qatar Airways sy Monacair fiaraha-miasa dia manome helikoptera tsy misy tohatra eo anelanelan'i Monaco sy Nice
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Qatar Airways sy Monacair fiaraha-miasa dia manome helikoptera tsy misy tohatra eo anelanelan'i Monaco sy Nice
Enga anie 31, 2017
Qatar Airways sy Monacair dia faly nanambara fiaraha-miasa vaovao eo amin'ny iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manerantany sy ny mpiasan'ny helikoptera premium Riviera frantsay, nanomboka ny 4 Jolay.
Ireo mpandeha Qatar Airways tonga tao Nice ao anaty serivisy mivantana natolotry ny zotram-pitaterana an'habakabaka vaovao an'i Nice dia hanana fotoana hifandraisana tsy tapaka amin'ny seranam-piaramanidina Nice International mankany amin'ny sidina helikoptera Monacair mankany Monte Carlo. Toy izany koa, ireo mpandeha izay mizotra avy any Monaco mankany Nice amin'ny alàlan'ny angidimby dia afaka mifandray amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Nice amin'ny safidy toerana mihoatra ny 150 ao amin'ny tambajotran'izao tontolo izao Qatar Airways.
Ity fiaraha-miasa ity dia hiantohana ireo mpandeha mandeha sy miverina any Monte Carlo hankafy ny serivisy mitohy sy mitohy avy any an-tranony mankany amin'ny toerana farany, miaraka amin'ny famandrihana tokana sy fifandraisana.
Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: "Ity fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'i Monacair ity dia mitambatra tanteraka amin'ny alàlan'ny fanombohana ny serivisy mivantana mivantana mankany Nice, ahafahan'ny mpandeha mivezivezy mankany Monaco ao anatin'ny enina minitra monja avy any Nice International. Airport. Ny fiaraha-miasa stratejika, na hanatsara ny tamba-jotra, ny fifandraisana na ny vokatra, dia mitohy mitana andraikitra lehibe amin'ny Qatar Airways. Ny fifanarahana miaraka amin'i Monacair dia taratry ny fahavononantsika hanome ny mpandeha ny fivezivezena tsara indrindra ary matoky aho fa hahafaly ireo mpandeha io fiaraha-miasa vaovao io. ”
"Faly be izahay amin'ity fiaraha-miasa vaovao ataon'ny Monacair sy Qatar Airways ity," hoy i Gilbert Schweitzer, Tale mpitantana ny Monacair. “Tahaka ireo tolotra hafa natolotry Monacair, tianay ny hanome ny tsara indrindra ny mpandeha anay. Ny H130 dia manome traikefa manokana momba ny dia izay tianay hizara amin'ny mpanjifan'ny Qatar Airways. ”
Manomboka amin'ny 4 Jolay, serivisy mivantana mivantana dimy heny isan-kerinandro ho any Nice avy any Nice no hiasa miaraka amin'ny Dreamliner Boeing 787, hanome ny mpandeha eran'izao tontolo izao hiditra amin'ny toerana fizahan-tany malaza any amin'ny Riviera Francesa.
Monacair sy Qatar Airways dia mizara soatoavina mitovy amin'izany, manambatra ny kalitaon'ny fiaramanidina maoderina sy mahomby miaraka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka.
Class Business ao amin'ny Qatar Airways 'Boeing 787 Dreamliner dia manolotra fanamboaran-trano rehetra, miaraka amina seza amina endrika diamondra tokana hanolorana toerana manokana. Seza mipetraka tanteraka sy mora azo, ny sehatry ny asa ergonomika dia mamorona tontolo iainana mahasalama sy mamokatra. Manampy ny traikefa dia ny menio Business Class isan-karazany miaraka amin'ny sakafo tsy manam-paharoa sy serivisy an-tsitrapo an-tsitrapo manome ny kalitao faran'izay avo lenta sy ilaina indrindra.
Qatar Airways 'Boeing 787 Dreamliner Economy Class dia manome efitrano malalaka ho an'ny mpandeha mihoatra ny taloha, miaraka amin'ny habaka manokana 30 santimetatra feno ary seza 31 santimetatra manome toerana hipetrahana sy hialana sasatra.
Ny Wi-Fi an-tsambo dia mamela ny mpandeha rehetra hifandray amin'ny fotoana rehetra, ary ny interface voalohany misy ny efijery indroa manerantany dia manamora kokoa ny multitask, ahafahan'ny mpanjifa milalao lalao amin'ny fitaovan'ny tanany rehefa mijery sarimihetsika amin'ny efijery manokana , izay misy singa fanaraha-maso efijery azo tsapain-tanana.
Ireo mpandeha dia afaka mamandrika amin'ny www.qatarairways.com na amin'ny alàlan'ny masoivohony dia zotram-pifandraisana iray izay hampiditra ny sidina Qatar Airways mankany sy avy any Nice ary ny sidina angidimby mankany Monaco tantanan'ny Monacair. Ireo mpanjifa manidina amin'ny Qatar Airways Boeing 787 Dreamliner dia mankafy traikefa tsy misy toy izany, izay iarahan'ny teknolojia fivoarana miaraka amin'ny fomba fanaon'ny olona hamolavola ny fanerena ny kabine ambany, ny kalitaon'ny rivotra ary ny hamandoana tsara indrindra, mifameno amin'ny serivisy natolotry ny mpandresy. ekipazy.
International Marriott: Taom-pandrosoana tao Asia Pasifika
American Airlines mankalaza ny fampidirana sy ny fahasamihafana mandritra ny volana PRIDE